Inkqubo yokuzibophelela kwi-5: Ukuvuleleka nangokuzinikela kwishishini ukuzinikela 1.Our ikampani yethu ikhuthaza ngokuzithemba ukwakhiwa kwamatyala okuthenga kunye nokuziphatha, ngokuthobela umthetho ngokukhuselekileyo kwamalungelo kunye nemidla yabathengi, yenza ngokunyanzelekileyo uxanduva lwabanini beshishini, .. .
Ibhetri yokuqala yokuhanjiswa kweebhedi ze-ICU zesibhedlele se-pukang kwindawo yesifo saseMalaysia zidluliselwe ngempumelelo ngomoya.
Kuala Lumpur, Nge-6 ka-Epreli (AFP) - nge-12 nge-12 namhlanje, i-coronavirus yenqaku laseMalaysia yaqinisekisa amatyala ayi-131 kunye nokusweleka kwabantu abangama-62, oko kusizisa inani elipheleleyo lamatyala aqinisekisiweyo ku-3,793. Namhlanje, bangama-236 abantu abagxothiweyo esibhedlele, nto leyo ezise inani elipheleleyo lamatyala abuyiselweyo kwi-1,241. Ukongeza, ...
Ingqondo enye yokuthintela kunye nokulawula ubhubhane-HEBEIPUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. iimpahla ezinikelwayo kunye nezixhobo zokulwa nxamnye ne-COVID-19
UNyaka oMtsha uqala ngo-2020, ukuSasazwa kunye nokuphuhliswa kwe-COVID-19 kuchaphazela ubomi obuqhelekileyo kwiintsapho ezininzi. Abasebenzi beMedical eWuHan nakwezinye iindawo kwilizwe liphela basebenza kumgca wangaphambili wokuthintela ubhubhane nolawulo.Ukuze ukhusele ngcono impilo yabantu, iXuShui ...